BoloJi Pro အက်ပလီကေးရှင်းကိုဒေါင်းလုပ် 2022 - အခမဲ့ - 9Apps
3.6 | 5,000,000+ ထည့်သွင်းရန်
ဒေါင်းလုပ် APK（25.6MB） ယခင်ဗားရှင်း
၏ဖော်ပြချက် BoloJi Pro
ကျွန်ုပ်တို့သည်ကမ္ဘာတဝှမ်းရှိလူများအတွက်အံ့သြစရာကိုဖန်တီးရန်ကတိကဝတ်ပြုထားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ပျော်စရာတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုနှင့်မိတ်ဆွေများနှင့်စကားပြောခြင်းနှင့်သူတို့နှင့်အတူပျော်မွေ့ပါ။ သင်ရွေးချယ်သောအသုံးပြုသူများကိုမြှင့်တင်နိုင်ပြီးပျော်စရာကောင်းသော Boloji Pro တွင်အအေးဆုံးအတွေ့အကြုံကိုခံစားပါ။
◾video chat နှင့် live text
သည်မတူညီသောသုံးစွဲသူများနှင့်အတူဗွီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုများနှင့်ရင်ဆိုင်ရန်မျက်နှာများကိုနှစ်သက်သည်။ သင်၏ရွေးချယ်မှုအသုံးပြုသူများကိုရွေးချယ်ပြီးဗွီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုတစ်ခု, သူတို့နှင့်အတူပျော်စရာကောင်းအောင်လုပ်ပါ။
Boloji နှင့် Secure 🔒
Boloji Pro သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အတွင်း၌လုံခြုံမှုနှင့်လေးစားမှုကိုတသမတ်တည်းသေချာစေရန်ပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်သည် ရပ်ရွာ။ ကျွန်ုပ်တို့နှင့်မသင့်လျော်သောအပြုအမူများကိုကျွန်ုပ်တို့သည်းမခံနိုင်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အကောင်းဆုံးအတွေ့အကြုံကိုသေချာစေရန်တင်းကျပ်သောအသုံးပြုမှုဆိုင်ရာလမ်းညွှန်ချက်များနှင့်ကျယ်ပြန့်သောလုံခြုံမှုဆိုင်ရာအင်္ဂါရပ်များစာရင်းရှိသည်။
◾chatသမိုင်းနှင့်ဆက်သွယ်ရန်ဆက်သွယ်ပါ သင်၏ Video Chat & Text Chat History ကိုထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ပါ။ သင်၏မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းများနှင့်အမှတ်ရစရာအချိန်များကိုသင်ဘယ်တော့မျှဆုံးရှုံးမည်မဟုတ်ပါ။ VEL VISE Chat တွင်ထာဝရသူငယ်ချင်းများ! ကျပန်းဗီဒီယိုချက်တင်စကားပြောခြင်းနှင့်သူစိမ်းစကားဝိုင်း၏သမိုင်းကိုစောင့်ရှောက်ပါ။ သင်မှန်ကန်သောနေရာ၌ရှိနေသည်! သင်၏ Video Chat, တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့်ဗွီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုများကိုခံစားပါ။ ဒါကြောင့်မင်းဘာကိုစောင့်နေတာလဲ။ Boloji Pro မှာငါ့ကိုတွေ့မယ်!
သင်၏မိတ်ဆွေသစ်များနှင့်အတူဘဝ, sing သီချင်းများ, အသံခေါ်ဆိုမှုသို့မဟုတ်ဗွီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုကိုတိုက်ရိုက်ဟောပြောခြင်းနှင့်ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေပါ။ ဒေသခံမိတ်ဆွေများကိုအတူတကွရှာဖွေပါ။
ရုပ်ရှင်အဖော်ကိုရှာဖွေနေသည်ဖြစ်စေ, သင်၏အတွေးအခေါ်များကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုရန်, Chat app သည်သင့်ကိုကူညီရန်အကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်နေသည်။ ယခု Boloji လိုလားသူလာပါ။
အကယ်. သင့်တွင်မေးခွန်းများရှိပါက ကျေးဇူးပြု. [email protected] သို့ဆက်သွယ်ပါ
ဘာအသစ်လဲ BoloJi Pro 10.1.8.1129